China 330kV okpukpu abụọ akaghị nnyefe ụlọ elu Manufacture na Factory | XY Tower
A ga-ekenye onye na-azụ ahịa ahịa ga-arụ ọrụ mgbe erechara ahịa maka ndị ahịa.
Anyị ga-enye ngwugwu ntuziaka na nwụnye ịbịaru ndị ahịa nke nwere ike inyere ndị na-ewu ụlọ aka ịwụnye ụlọ elu.
Ọ bụrụ na ndị na-ewu ụlọ enwee nsogbu ọ bụla mgbe ha na-akpọkọta ụlọ elu ahụ, anyị ga-achọ inye aka ọ bụla anyị nwere ike. Gụnyere anyị nwere ike inye nduzi site na njikọ vidiyo ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ.
Maka ụfọdụ ọrụ, anyị ga-akwadebe ụfọdụ ngwaahịa ndị ọzọ maka ndị ahịa n'efu maka igbochi ụfọdụ ọnọdụ atụghị anya.
Oge ikike nke ngwaahịa a bụ afọ 50.
Nke gara aga: 330kV okpukpu abụọ loop
Osote: 0lọ elu akara ụdị 330kV M
Owlọ Elu Eletriki